Vaovao - Manana tsena mamirapiratra ny tsenan'ny plastika
Ny tsenan'ny gorodona plastika dia manana ho avy mamiratra
Ny gorodona plastika amin'izao fotoana izao dia fitaovana fiarovana fiarovana tontolo iainana maitso haitao avo lenta amin'ny fitaovana manerantany. Hatramin'ny nampidirana ny gorodona plastika teto amin'ny firenentsika dia dimy na enin-taona no fampandrosoana. Antenaina fa hiditra amin'ny vanim-potoanan'ny fampandrosoana haingana ny taona vitsivitsy manaraka.
Ny gorodona vita amin'ny plastika amin'izao fotoana izao dia fitaovana vaovao avo lenta sy maitso avo lenta amin'ny tontolo iainana amin'ny fananganana manerantany. Nampiasaina be tamin'ny tetikasa haingon-trano vahiny izy io. Ankehitriny ny varotra (toeram-pivarotana, tranobe misy birao, seranam-piaramanidina, gara), fanabeazana (sekoly, akanin-jaza, gymnasium, trano famakiam-boky), fanafody (hopitaly, ozinina fanafody), ozinina sy indostria hafa dia be mpampiasa, ary nahavita valiny nahafa-po, ny haben'ny mitombo isan'andro ny fampiasana. Ny fampandrosoana haingana dia tsy ho an'ny fiheverana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny tontolo iainana ihany, fa ny fanatsarana ny teknolojia famokarana, ny kalitaon'ny vokatra ary ny fiainana amin'ny serivisy amin'ny famokarana vokatra plastika. Izany dia tokony ho noho ny fivoaran'ny maitso ny plastika. Dikany
Ny tatitry ny fanadihadiana sy ny fanadihadiana momba ny tsena eo amin'ny sehatry ny gorodona plastika dia mampiseho fa misy karazany telo amin'ny gorodona PVC: gorodona mihodina amin'ny PVC, gorodona vita amin'ny PVC, ary gorodona PVC. Ny fahaizan'ny famokarana plastika PVC dia manodidina ny 2 tapitrisa metatra. Tamin'ny 2016, nahatratra ny famokarana sy ny varotra tanteraka izy io. Taorian'ny fivoaran'ny tsena tamin'ny 2015, ny fenitra eropeana sy ny fenitra amerikana dia nahavita fanamarinana tamin'ny ankapobeny. Miaraka amin'ny fiarovana tsara ny tontolo iainana, dia soloina indrindra ny fitambarana antonony hatramin'ny farany. Flooring, ireo vokatra ankehitriny dia miorina amin'ny fanondranana.
Miaraka amin'ny fanatsarana ny teknolojia famokarana sy ny fanatsarana ny fizotrany, ny gorodona plastika dia lasa tompon'ny tombony amin'ny fahombiazana. Midika izany fa ny tombony azo avy amin'ny gorodona plastika amin'ny ho avy dia hitombo hatrany. Ny tombony azo avy amin'ny haingon-trano dia mifantoka avokoa.
Nanamarika ireo teknisianina andrana fa ny fahamendrehana amin'ny fampitaovana ny gorodona plastika no "ain'ireo" vokatra ireo. Amin'ny fomba fijerin'ny famolavolana famolavolana, ny fanadihadiana sasany dia tokony hatsaraina mba hanatsarana ny fahombiazan'ny vokatra. Amin'izany fomba izany dia hihamaro hatrany ny androm-piainan'ny gorodona plastika. Lava sy maharitra.
Amin'izao fotoana izao, ny gorodona plastika dia karazan-jiro maitso avo lenta sy milamina amin'ny tontolo iainana. Fikambanana fanta-daza fanadihadiana sy fanandramana avy any an-toerana fanta-daza no nilaza fa hanome ny teknolojia fandinihana mandroso hanome antoka azo antoka sy azo antoka ho an'ny kalitao sy ny fiarovana ny gorodona plastika. Làlana vaovao.
Fotoana fandefasana: 04-06-21